वासबाङमा पोषण शिविर, प्रायः बालबालिकामा कुपोषण – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
वासबाङमा पोषण शिविर, प्रायः बालबालिकामा कुपोषण
२०७० चैत्र २९, शनिबार ०१:४८ गते
लोथर । लोथर ६ वासबाङका प्रायः बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका छन् । बिहीबार उपस्वास्थ्य चौकी वासबाङमा गरिएको पोषण स्वास्थ्यसम्बन्धी शिविरमा ९९ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको हो ।
कुल ३ सय ७२ बालबालिककोे स्वास्थ्य परीक्षणमा ९९ प्रतिशतमा त्यस्तो समस्या देखिएको पोषण पुनसर््थापना गृह भरतपुर अस्पतालकी परियोजना अधिकृत कविता खतिवडाले बताइन् । केही बालबालिकाको उद्दार गरिए पनि अन्य कुपोषित बालबालिका भने उद्दारको पर्खाइमा छन् ।
उल्लेखित बालबालिकामध्ये ५४ जनामा जटिल कुपोषण देखिएको छ । कुपोषणबाट ज्यानै जानसक्ने खतराको अवस्थामा पुगेको भन्दै पोषणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका केही संस्थाले २२ जना कुपोषित बालबालिकाको शिविरबाटै उद्दार गरेर भरतपुर ल्याएको छ । जसमध्ये १० जनालाई उपचारको लागि शुक्रबार काठमाडौँ लगिएको छ ।
‘अन्य बालबालिकामा पनि कुपोषणको समस्या देखिएको छ, अधिकृत खतिवडाले भनिन्,‘उनीहरुको बेलैमा उपचार हुन नसके ज्यान जोखिममा छ ।’ शिविरमा जाँच गरिएकामध्ये दुईचार जना बालबालिकामात्र कुपोषणबाट टाढा रहेको उनले बताइन् ।
सन्तुलित भोजनको अभावमा कुपोषण लागेर चितवनका पहाडी भूगोलमा वर्षेनि बालबालिकाको मृत्यु हुँदै आएको छ । लोथर, सिद्धिजस्ता पहाडी गाविसमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य शिविरहरु निरन्तर भइरहे पनि पोषण स्वास्थ्य शिविर भने पहिलो पटक भएको हो । जहाँ लोथर गाविसको ६, ७ र ८ वडाका स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो । बच्चाको तौल, उमेर र उचाइलाई ख्याल गरेर कुपोषण भए–नभएको पत्ता लगाइन्छ ।
सहरमा समस्या नभए पनि गाउँमा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका निमित्त प्रमुख ईश्वर पोखरेलले पहाडी क्षेत्रमा सबैजसो ठाउँमा नियमित पोषण स्वास्थ्य शिविरको आवश्यकता रहेको बताए ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयकै पोषण कार्यक्रम संयोजक दुर्गा चापागाईले नारायणगढ र भरतपुरलाई हेरेर पहाडी क्षेत्रमा कुपोषण वा अन्य स्वास्थ्य अवस्थाको अनुमान गर्न नहुने बताए । शुक्रबार भरतपुर अस्पतालमा रहेको पोषण गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा दियालो परिवार नारायणगढका अध्यक्ष राजेन्द्र पिया, कार्यकारी निर्देशक केदारनाथ खनाल, भरतपुर अस्पतालका मेसु डा. हरिबहादुर केसी, जिविस चितवनका सूचना अधिकृत बलराम लुर्इंटेल, नेपाल यूथ फाउण्डेसनका राजेन्द्र काफ्लेलगायतले बोलका थिए ।
बिहीबार वासबाङमा गरिएको शिविर दियालो परिवार नारायणगढ, नेपाल यूथ फाउण्डेसन र पोषण पुनसर््थापना गृह भरतपुर अस्पतालको संयुक्त आयोजना रहेको थियो । शिविरमा उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेजबाट बालरोग विशेषज्ञ डा. कुवेर रेग्मी र पुष्पाञ्जली अस्पतालबाट डा. सशांंक सिंहको उपस्थिति रहेको थियो । भण्डारा मलेखु पहाडी राजमार्गबाट जाँदा वासबाङसम्म पुग्न ५ घण्टा लाग्छ ।
भरतपुर अस्पतालमा दुई वर्षदेखि दियालो परिवार नारायणगढको विशेष सहयोगमा पोषण पुनसर््थापना गृह सञ्चालनमा छ । यहाँबाट १०० बढीले सेवा लिइसकेका छन् भने केहीले सेवा लिइरहेका छन् ।